Raspberry Pi Foundation Inotangisa Iyo Nyowani Raspberry Pi 3 Muenzaniso A + | Linux Vakapindwa muropa
La Raspberry Pi Foundation yakaburitsa nhau nyowani, nekuti nguva pfupi yadarika akafumura kuunzwa kwebhodhi idzva, iyo Raspberry Pi 3 Model A +.
Iyo Raspberry Pi 3 Muenzaniso A + inouya pamwe nekuenderera pamwe nekuvandudzwa kweakateedzana «A». Iyo "A +" modhi yakamisikidzwa seyakareruka uye yakawanda komputa vhezheni ye "B +" modhi.
Aya maRaspberry Pi A mamodheru anotarisana nekushandiswa mune zvakadzamidzirwa mhinduro uye masisitimu anoda mashoma simba rekushandisa, izvo zvisingade kubatana kweEthernet uye chiteshi che USB chete.
1 Chii chitsva muRaspberry Pi 3 Model A +.
2 Musiyano kubva ku3 B + uye 3 A + modhi
3 Raspberry Pi 3 A + ichawanikwa riini?
Chii chitsva muRaspberry Pi 3 Model A +.
Yayo ichangobva kuziviswa kuburitswa nyowani inotora iyo Pi 1 Model A + uye inosimudza iyo kune iyo specs yePi 3, inosanganisira imwecheteyo 64-bit quad-core processor yakavharwa pa1.4Ghz uye ne2.4 / / isina waya network. Muenzaniso B +.
Kuteedzera iwo mafekitori eiyo echinyakare Model A, inodarika chiteshi cheEthernet uye ine chiteshi che USB chimwe chete pane mana anowanikwa paB +.
Zvimiro zveiyo nyowani Raspberry Pi Model A +.
Processor : Broadcom BCM2837B0, CorteC-A53 64GHz 1,4-bit SoC
Memory : 512MB LPDDR2 SDRAM
Kubatana : 802.11 GHz uye 2.4 GHz IEE 5.b / g / n / ac isina waya LAN, Bluetooth 4.2 / BLE
Access Yakawedzerwa 40-pini GPIO musoro
Vhidhiyo uye kurira : 1 × yakazara saizi HDMI
MIPI DSI inoratidza chiteshi
MIPI CSI kamera chiteshi
4-pole stereo kuburitsa uye inoumbwa nevhidhiyo chiteshi
Multimedia: H.264, MPEG-4 (1080p30) kududzira;
H.264 (1080p30) encoding;
OpenGL ES 1.1, mifananidzo 2.0
Kadhi re SD - Micro SD fomati yekukodha iyo inoshanda sisitimu uye dhata yekuchengetedza
Simba rekuisa : 5 V / 2,5 A DC kuburikidza nediki micro USB chinongedzo 5 V DC kuburikidza neGPIO musoro
Zvakatipoteredza: Kushanda kwekushanda, 0-50 ° C.
Hupenyu hwekugadzira: Iyo Raspberry Pi 3 Muenzaniso A + icharamba iri mukugadzirwa kusvika munaNdira 2023.
Musiyano kubva ku3 B + uye 3 A + modhi
Misiyano mukuita uye masimba emagetsi anogona kunge akafanana, hazvo Panyaya yekuratidzira, iyo Model 3 B + ndiyo yakanyanya nyore.
Uyu muenzaniso Iyo inouya ne8GHz ARMv1,4 quad-core processor, Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet (max 300Mbps), USB 2.0, uye HDMI.
Kana iri iyo itsva Raspberry Pi 3 Model A + iyo inofanirwa kuve iri diki modhi, asi ine yakawanda yezvakanakira iyo Model B +.
Iine zvimwe zvakafanana, Kunze kwekunge iwe wawana 512MB RAM pachinzvimbo che1GB, panongova neimwe chete USB 2.0 chiteshi uye iyo Ethernet chiteshi yaenda.
Kunyanya iyo inonyanya kushanda zvakanyanya 64-bit CPU uye yakapetwa kaviri saizi ye RAM, chiratidzo cheiyo nyowani A + modhi kutsigirwa kwakavakirwa kweasina waya 802.11.b / g / n / ac (2.4GHz uye 5GHz) uye Bluetooth 4.2 / BLE.
Iyo Hardware padding shanduko inoratidzawo yakagadziridzwa rutsigiro rwekutora kubva kuUSU madhiraivha uye zvirinani manejimendi manejimendi uye tembiricha kudzora (kana iyo chip tembiricha iri 70 °, iyo frequency iri 1.4GHz, asi kana iyo tembiricha ichidarika 70 °, iyo frequency inoderera kusvika 1.2GHz uye mune chip voltage).
Kana iwe usingade toni ye RAM kana Ethernet, inoshamisira inoshamisira mini-komputa.
Kunyangwe iwe wakambotamba neRaspberry Pi munguva yakapfuura, mamodheru apfuura achasvika nenzira yakareba. Iyo processor yava nesimba rakaringana kubata mabasa anodikanwa.
Chokwadi, zvinotora nguva yakareba kuti transcode vhidhiyo, unzip hombe faira, kana kuvhura mutambo wakateedzerwa pane Raspberry Pi pane pane laptop.
Asi Kana iwe uchida komputa isina fanera inomhanya 24/7, zvakaoma kuwana chimwe chinhu chakachipa. Docker inoshanda chaizvo pairi, ichiita kuti zvive nyore kunyatso chengetedza kana iine mudziyo.
Raspberry Pi 3 A + ichawanikwa riini?
Iyi modhi nyowani yakaziviswa neRaspberry Pi Foundation Ichatanga kutengeswa muna Zvita nemadhora makumi maviri nemashanu.
Uye senguva dzose ichave iine yakananga Raspbian tsigiro. Kunyangwe ivo vachigonawo kushandisa iyo NOOBS mushandisi interface kuisa akasiyana akasiyana pane iyo SD kadhi
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Raspberry Pi Foundation Inotangisa Nyowani Raspberry Pi 3 Muenzaniso A +
RPi yaigara ichiita senge inodhura kwandiri kana ichienzaniswa nemakwikwi ayo (iine simba rakawanda rakasvibira kupfuura iyo Pi) uye nhasi inozvisimbisa, madhora gumi kuderera kurasikirwa nehafu yekubatana i'katemwa '. Shamwari yakaitenga kuti iite yepakati kusvetuka pakati pebhubhu TV uyezve kune ramangwana rinotungamirwa TV, akazopedzisira azvitengesa nekuda kwemusoro waakamupa uye kusashanda zvakanaka, akapedza mwedzi mishanu achiedza kuzvigadzirira, ini tora yega yega 10 min kuburikidza neanalogue kuburitsa iyo 'yakadzimwa'. Kune makumi mashanu nematatu ini ndinotenga combo yeOrangePi, yakanyanya kufara